အဓိက nonrewarding လှုံ့ဆော်မှုမှလူ့ Striatal တုံ့ပြန်မှု (2003) - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်
အဓိက Nonrewarding လှုံ့ဆော်မှု (2003) မှလူ့ Striatal တုံ့ပြန်မှု
J ကို neuroscience ။ 2003 Sep 3;23(22):8092-7.
Zink CF1, Pagnoni, G, မာတင် ME, Dhamala M က, Bern GS.
အဆိုပါ striatum နှင့်၎င်း၏အဓိက dopamine သွင်းအားစုနှစ်ဦးစလုံး၏တဦးတည်းအဆိုပြုထား function ကိုဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု coding နှင့်ဆက်စပ်သောသော်လည်းတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအမြင်မခွဲခြားဘဲမိမိတို့အကျိုးကိုတန်ဖိုး, အဓိကဖြစ်ရပ်များ processing အတွက် striatum တစ်ဦးထက်ပိုသောယေဘုယျအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုထားသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်နှင့် (ဆိုလိုသည်မှာနှိုးဆွ) အနေနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို-အပြုအမူ switch ကို elicits ကြောင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် saliency သတ်မှတ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများတွင်အဓိကလှုံ့ဆော်မှု nonrewarding မှလူ့ striatal တုံ့ပြန်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုသုံးပြီး, သွေးအောက်ဆီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို signal ကိုတစ်ဦးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတာဝန်များ၏နောက်ခံတင်ပြအမြင်အာရုံ distractors flickering တုံ့ပြန်တိုင်းတာခဲ့သည်။ Distractor salience distractor ဖြစ်ပျက်မှု၏ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ခြယ်လှယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကွာခဏပေးအပ် distractors မကြာခဏတင်ဆက် distractors ထက်ပိုပြီးအဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်း distractors ၏အမူအကျင့်ဆက်စပ်မှု striatal တုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲထုတ်များအတွက် saliency တစ်ဦးလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းခဲ့ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှု (19 ဘာသာရပ်များ) ခုနှစ်, distractors ခလုတ်စာနယ်ဇင်းလိုအပ်ပစ်မှတ်အဖြစ်သူတို့ထဲကအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင် defining နေဖြင့်အပြုအမူသက်ဆိုင်ရာလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယစမ်းသပ်ချက် (17 ဘာသာရပ်များ) ခုနှစ်, distractors (ဆိုလိုသည်မှာသူတို့မည်သည့်တုန့်ပြန်မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး) အပြုအမူသက်ဆိုင်ရာကြဘူး။ အဆိုပါ fMRI ရလဒ်များကိုခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော (အမြင့်ဆုံး salience) နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်အတွက် distractors ၏မကြာခဏ (အနိမ့် salience) တင်ဆက်မှုမှဆွေမျိုးပြီးနောက်နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးမြှင့် activation ဖော်ပြခဲ့တယ်။ အဆိုပါ distractors အပြုအမူသက်ဆိုင်ရာသောအခါ Caudate လှုပ်ရှားမှုသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည် nonrewarding အဓိကဖြစ်ရပ်များ coding ထဲမှာ striatum တစ်အခန်းကဏ္ဍဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်လှုံ့ဆော်မှု၏အမူအကျင့်ဆက်စပ်မှုအညီ striatum တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivision အကြံပြုသည်။
အဆိုပါ striatum အမျိုးမျိုးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအတွက်မော်တာများနှင့်သိမြင်မှုနှစ်ခုလုံးကိုပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတိအကျသဘောသဘာဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မသိသောနေဆဲဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်သုတေသန၏ဆယ်စုနှစ် (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, မြင် striatum နှင့်၎င်း၏ phasic dopaminergic input ကိုနှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု coding ထဲမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြု Schultz, 1998; Schultz et al ။ , 2000) ။ လူသားတွေအတွက်မကြာမီက neuroimaging လေ့လာမှုများ (ဤတောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့Delgado et al ။ , 2000; Knutson et al ။ , 2000, 2001a,2001b; Bern et al ။ , 2001, Breiter et al ။ , 2001; Pagnoni et al ။ , 2002; Elliott သည် et al ။ , 2003) ။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအမြင်ထက်အထူးသ (၎င်း၏အဓိက dopaminergic သွင်းအားစုများအပါအဝင်) ကို striatum အတွင်းလှုပ်ရှားမှု codes တွေကိုအပါအဝင်နှင့်ဆုလာဘ်ထက်ကျော်လွန်တိုးချဲ့အားလုံးအဓိကဖြစ်ရပ်များ, ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှု processing ဆိုထားပါတယ်။ (ဤနေရာတွင် Salience ဖြစ်စေနှိုးဆွနေကြတယ်ဆိုမမျှော်လင့်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများကိုရည်ညွှန်းသို့မဟုတ်တစ်ခုအာရုံကို-အပြုအမူ switch ကိုထုတ်ယူRedgrave et al ။ , 1999; Horvitz, 2000) ။ ဒီအမြင်အဘို့သက်သေအထောက်အထား (ထို dorsal ဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများမှလာRolls et al ။ , 1983; Caan et al ။ , 1984; Hikosaka et al ။ , 1989; Ravel et al ။ , 1999; Shimo နှင့် Hikosaka, 2001) နှင့် ventral (Williams က et al ။ , 1993; Setlow et al ။ , 2003) striatal အာရုံခံအထူးသဖြင့်လာသောအခါမမျှော်လင့်ဘဲ, arousal, ဆန္ဒရှိ, ဝတ္ထု, နှင့်အပြုအမူသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအပါအဝင်ထိုကဲ့သို့သောအဓိကလှုံ့ဆော်မှု, တုံ့ပြန်ကြသည်။ ထို့အပြင်အတော်ကြာပုံစံများအတွက်အဓိက nonrewarding လှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်ဟာ striatum အတွက် dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက် (ပစ်ခတ် midbrain dopaminergic အာရုံခံဆဲလျတိုးပွါးတွေ့ Horvitz, 2000) ။ အားလုံးနီးပါး striatal ဆဲလ် midbrain dopaminergic Project (ဖွငျ့ innervated ကြောင့်ဤအတွေ့ရှိချက်အဓိကဖြစ်ရပ်များ processing အတူ striatum လင့်ထားသည်အာရှရပင် et al ။ , 1995) ။ တစ်ဦးကြိုးအခြေအနေတွင်ပြင်ပ, အဓိကဖြစ်ရပ်များ၏ striatal အပြောင်းအလဲနဲ့လူသားများတွင်အများအားဖြင့် unexplored ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်လူ့ neuroimaging လေ့လာမှုများပြစ်ဒဏ် (Knutson et al နှစ်ဦးစလုံးမှတုန့်ပြန်တိုးလာ striatal လှုပ်ရှားမှုထင်ရှားခဲ့ကြ။ , 2000, 2003) နှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (Becerra et al ။ , 2001); သို့သော်လူသားများအတွက်ပြစ်ဒဏ်မတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (တိုးလာ striatal လှုပ်ရှားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်Delgado et al ။ , 2000) ။ ထိုသို့သောပဋိပက္ခဖြစ်ရလဒ်များကိုအပြုအမူအခြေအနေတွင်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေပြင်းအား striatal function ကိုပြောင်းလဲပစ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာစေရန်, ကြားနေအဓိကလှုံ့ဆော်မှု processing အတွက် striatum ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသညျလူသားတို့အတွက်အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း (caudate, putamen နှင့် nucleus accumbens) ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကြားနေသောအဓိကအဖြစ်အပျက်များမှ modulated မည်သို့စုံစမ်းခဲ့သည်ကိုစုံစမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်ချက်များတွင်တောက်ပနေသောအမြင်အာရုံဆိုင်ရာအာရုံထွေပြားများကိုပြင်ပဘာသာရပ်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ distractor salience distractor ဖြစ်ပျက်မှု၏ကြိမ်နှုန်းကိုပြောင်းလဲအားဖြင့်ကြိုးကိုင်ခဲ့သည်။ မကြာခဏဖြစ်ပျက်မှုများထက်သူတို့၏ဖြစ်ပျက်မှုသည်မူလကပင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုနည်းသောကြောင့်မကြာခဏဖြစ်ရပ်များသည် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ကျနော်တို့လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ခဲ့ရုံရှိမရှိမွေးရာပါ striatal activation ထုတ်ယူနှိုးဆွခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်နှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ပထမစမ်းသပ်မှုတွင် distractors များသည်အပြုအမူနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုတွင် distractors များသည်အမူအကျင့်နှင့်မသက်ဆိုင်သောကြောင့်တုံ့ပြန်မှုမလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုကြီးမားသော fMRI signal ကို striatum တွင်မကြာခဏ (salience နည်းပါးသော) အာရုံပျံ့လွင့်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် striatum တွင်တိုင်းတာမည်ဖြစ်ပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်လှုပ်ရှားမှုကိုအမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုအားဖြင့် modulated လိမ့်မည်ဟုယူဆခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်များ။ သုံးဆယ့်ခြောက်ဦးကို right-လက်ကျန်းမာလူကြီးများ (19 အမျိုးသမီး, 17 အထီး), အသက်အရွယ် 19-44, စမ်းသပ်မှု 19 အတွက်စမ်းသပ်မှု 1 နှင့် 17 အတွက် 2, လေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ နှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်၏တူပေးထား, ဘာသာရပ်များနှစ်ခုသီးခြားနမူနာစမ်းသပ်မှု-retest ရှက်ကြောက်ရှောင်ရှားဖို့စမ်းသပ်ချက်အဘို့စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်ဘာသာရပ်များ (အုပ်စုများအကြားအသက်အရွယ်မသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုအတူအုပ်စုများအကြားအလားတူပထဝီမြေ, အ Emory တက္ကသိုလ်အသိုင်းအဝိုင်းထံမှစုဆောင်း) တူညီသောလူဦးရေထဲကနေနမူနာခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များအာရုံကြောသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါမမှန်မရှိသမိုင်းရှိခဲ့နှင့် Emory တက္ကသိုလ် Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုတဲ့ protocol ကိုများအတွက်အသိပေးသဘောတူညီခကျြကိုပေး၏။
စမ်းသပ်ဆဲလုပ်ငန်းများကို။ တုံ့ပြန်မှုကြိမ်အားလုံးလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြချက်များနှင့်အသံသွင်းတင်ပြ software ကို (Neurobehavioral စနစ်များ, Inc, ဆန်ဖရန်စစ္စကို,, CA) နဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု 1 အတွက် diagramed ဖြစ်ပါတယ် ပုံ 1 A။ အဆိုပါစကင်နာအတွက်ဘာသာရပ်များ 750 များအတွက်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်၏အလယ်ဗဟိုတွင်ကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်တင်ဆက်လေးအပြာပုံစံမျိုးစုံ (စတုရန်း, စတုဂံ, စက်ဝိုင်း, ဒါမှမဟုတ်တြိဂံ) ၏တ 2000 အတွင်း msec ကြည့်ရှုအားပေးနေစဉ် interstimulus ကြားကာလ (ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI) msec ။ ဘာသာရပ်များသူတို့တစ်တွေမျက်နှာပြင်၏အလယ်ဗဟိုရှိအချိန်မှာအပြာပုံစံမျိုးစုံတစျဦးကိုတွေ့မြင်မယ်လို့ပြောတယ်။ သူတို့ကသူတို့ဘက်၌တရားလက်ညှိုးတစ်တြိဂံ (ပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှု) သည်ထင်ရှားတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်သုံးပြီးခလုတ်ကို 1 နှိပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြသည်။ အခြားပုံစံမျိုးစုံ nontargets အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ nontargets ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်, သေးငယ်တဲ့, အဖြူရောင်, flickering (28 Hz) စက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်တြိဂံ (ကျပန်းလေးမျက်နှာပြင်ထောင့်နေရာများတွင်တစ်ဦးအတွက်) နောက်ခံထင်ရှား။ , ၏ပုံစံအတွက်အဓိက distractor အတွက် ဘာသာရပ်များတစ် flickering အဖြူပုံသဏ္ဍာန်ရံဖန်ရံခါဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလုပ်တခုကို၏နောက်ခံတွင်ပေါ်လာမယ်လို့နှင့် distractor တစ်တြိဂံ (တုံ့ပြန်မှု distractor) ခဲ့တဲ့အခါမှသာသူတို့ဘက်၌တရားလက်ခလယ်ကိုအသုံးပြုပြီးခလုတ်ကို2နှိပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်ကပြောကြားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကစက်ဝိုင်း distractors (nonresponse distractors) အားတုံ့ပြန်ရန်မလိုအပ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံး distractor အမျိုးအစားများ (တုံ့ပြန်မှုများနှင့် nonresponse) သူတို့အလားအလာတစ်တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်သောအပြုအမူသက်ဆိုင်ရာခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, distractors တစ်ဒင်္ဂအာရုံကိုများနှင့်အမူအကျင့် switch ကိုရူးနှမ်း။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းစမ်းသပ် session တစ်ခု 240 လှုံ့ဆော်မှုတင်ပြချက်များနှင့်အတူ, တစ်ဦးချင်းစီ 116 စက္ကတည်တံ့လေးပြေးပါဝင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပြေးမှာတော့ဗဟိုတြိဂံပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှု 29 ကြိမ်ထင်ရှား။ ,
အလုပ်များကိုသိထား။ တစ်ခုချင်းစီကိုနှိုးဆွ 750 msec (ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI, 2000 msec) အတွက်ထင်ရှား။ , အဆိုပါ Single-tailed မြှားခလုတ် 1 စာနယ်ဇင်းညွှန်ပြ; ယင်းကို double-Tails မြှားခလုတ်2စာနယ်ဇင်းဖော်ပြသည်။ A, စမ်းသပ်မှု 1, အပြုအမူသက်ဆိုင်ရာ distractors, မကြာခဏပြေးရာမှကောက်နုတ်ထားပါတယ်။ အဖြူရောင် distractors လက်ရှိတာဝန်များ၏နောက်ခံ flickering စက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်တြိဂံအဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ နောက်ခံအဖြူရောင် distractor တစ်တြိဂံအခါဘာသာရပ်များ (ဤနေရာတွင်မီးခိုးရောင်မှာပြသထားတဲ့) အပြာရောင်အလယ်ပိုင်းတြိဂံသည်ထင်ရှားလာသောအခါခလုတ်ကို 1 နှိပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားနှင့်ခလုတ်ကို2ခဲ့ကြသည်။ B, စမ်းသပ်မှု 2, အပြုအမူဆီလျှော် distractors, မကြာခဏပြေးရာမှကောက်နုတ်ထားပါတယ်။ အဖြူရောင် distractors လက်ရှိတာဝန်များ၏နောက်ခံ flickering စက်ဝိုင်းအဖြစ်ထင်ရှား၏။ (မီးခိုးရောင်အတွက်ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတဲ့) အပြာရောင်အလယ်ပိုင်းတြိဂံသည်ထင်ရှားလာသောအခါဘာသာရပ်များခလုတ်ကို 1 နှိပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမတုံ့ပြန်မှုဟာ distractors စေခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်မှာ distractors အချိန်နှင့်အာကာသအတွင်းကျပန်းထင်ရှား။ , အဆိုပါကိန်းဂဏန်းအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်သည့်ပုံစံများသက်သက်သာမှာလည်းတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက် (Data မှမပြ) ၏ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောပြေးအဆိုပါ distractors လျော့နည်းမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်း မှလွဲ. တူညီခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ distractor လှုံ့ဆော်မှုများ၏ salience ဖြစ်ပျက်မှု၏သူတို့ရဲ့ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ခြယ်လှယ်ခဲ့သည်; frequency ကို သာ. , ပိုပေးထားသောရုံးတင်စစ်ဆေးနေတဲ့ distractor ဆံ့မယ်လို့ဖွယ်ရှိ, အရှင် သာ. ကြီးမြတ်အကြိမ်ရေပျမ်းမျှအားနည်း salience အပေါ် သာ. ကြီးမြတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းပြေးခုနှစ်တွင်တစ်ဦး distractor လှုံ့ဆော်မှုဆက်တိုက် distractor လှုံ့ဆော်မှုများအကြား 25-1 (ပျှမ်းမျှ, 4) လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ 2.9 ကြိမ် (မကြာခဏ) သည်ထင်ရှား။ , အခြားသုံးပြေးစဉ်အတွင်းတစ် distractor လှုံ့ဆော်မှုသာဆက်တိုက် distractor လှုံ့ဆော်မှုများအကြား 4-24 (ပျှမ်းမျှ, 32) လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ 28.5 ကြိမ် (ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော) ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သုံးခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောပြေးရှိခြင်းအားဖြင့်, လုံလောက်သောအာဏာကိုတစ်ဦးစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော distractor လှုံ့ဆော်မှုရှိကြ၏။ အားလုံးပြေးခုနှစ်, distractor လှုံ့ဆော်မှုအချိန်အတွက် irregularly ဖြစ်ပွားခဲ့သည်များနှင့်ဘယ်တော့မှဗဟိုတြိဂံပစ်မှတ်အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာ။ ဘာသာရပ်များ fixate ဖို့ညွှန်ကြားထားနှင့်၎င်းတို့၏မျက်စိရွှေ့ဖို့လွတ်ကြ၏မခံခဲ့ရပါ။ Run နိုင်ရန်ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး counterbalanced ခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု2အတွက် diagramed ဖြစ်ပါတယ် ပုံ 1 B။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဘာသာရပ်များ၏တစ်ဦးကသီးခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အောက်ပါကွဲပြားခြားနားမှု မှလွဲ. တူညီတာဝန်ဖျော်ဖြေ: သူတို့တစ်တွေတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ဘယ်တော့မှကြောင်းအတွက် distractors အားလုံးစက်ဝိုင်းခဲ့ကြသည်နှင့်အပြုအမူဆီလျှော်။ ဘာသာရပ်များ, သူတို့ကအပြာပုံစံမျိုးစုံကြည့်ရှုလိမ့်မယ်လို့ပြောသည်တစ်ကြိမ်, မျက်နှာပြင်၏ဗဟိုနှင့်၎င်းတို့၏လက်ျာဘက်လက်ညှိုးတစ်တြိဂံသည်ထင်ရှားတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်သုံးပြီးခလုတ်ကို 1 နှိပ်ဖို့ညွှန်ကြားကြ၏။ ညွှန်ကြားချက်ပေးခဲ့သည့်အခါစမ်းသပ်မှု2ခုနှစ်, distractors သည့်ဘာသာရပ်များမှဖော်ပြခဲ့တဲ့မခံခဲ့ရပါ။ တဖန် distractors ၏ salience ဖြစ်ပျက်မှု၏သူတို့ရဲ့ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ခြယ်လှယ်ခဲ့ပါတယ်။ အပြုအမူသက်ဆိုင်ရာမဟုတ်သော်လည်းခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော distractors (အရောင် contrast နဲ့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုလိုသည်မှာကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူး) မိမိတို့၏ပင် arousal ဂုဏ်သတ္တိများ၏သီလအားဖြင့်အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
fMRI ပုံရိပ်။ scanning တစ် 1.5 တက်စလာ Philips က Intera စကင်နာ (Eindhoven, အဆိုပါနယ်သာလန်) ရက်နေ့တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်တစ်ဦး T1 မာန်တင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံရိပ်ကို 120 လေးတပြင်လုံးကို-ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပြေးလိုက်, ခန္ဓာဗေဒကိုကိုးကားနိုင်ရန်ဝယ်ယူခဲ့ T2 * အသှေးကိုအောက်ဆီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) အကျိုးသက်ရောက်မှု (gradient ကို-ပြန်လည်သိမ်းဆည်း -weighted တိုင်းတာရန်အသီးအသီးတို့ကိုစိစစ် echo- ပြိုပုံရိပ်; အထပ်ထပ်အချိန်, 2000 msec; အချိန်ပဲ့တင်သံ, msec 40; လှန်ထောင့်, 90 °; 64 × 64 matrix; အမြင်လယ်ပြင်, 240 မီလီမီတာ၏ anteroposterior commissural လိုင်းမှအပြိုင်ဝယ်ယူ 245မီလီမီတာ axial ချပ်) ။ ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကို padding ကိုအတူလျော့ချခဲ့သည်။
fMRI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အဆိုပါဒေတာစာရင်းအင်း parametric မြေပုံ (SPM99) (သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်Friston et al ။ , 1995b) ။ ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက်၊ ပြေးတိုင်းပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးမှု ၁၂ ချက်ကို magnetization ၏ယာယီအဆင့်နှင့်ဆက်စပ်သောအပိုပစ္စည်းများကိုလျှော့ချရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ multiscice ပုံရိပ်ဝယ်ယူမှုကနေရရှိလာတဲ့အချိန်ကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက်ချိန်ညှိအချပ်အချိန်ကိုက်ဆုံးမခြင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်လုပ်သောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုသို့ရွေ့လျားမှုကိုပြုပြင်သည့်အရာသည်ခြောက်ချက်ပါသောတင်းကျပ်သောကိုယ်ခန္ဓာအသွင်ပြောင်းခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာပုံရိပ်သည်တင်းကြပ်သောကိုယ်ခန္ဓာအသွင်ပြောင်းမှုဖြင့်သူတို့၏အလုပ်လုပ်ပုံကိုဖော်ပြရန်ပူးတွဲမှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီးနောက် Talairach ၏တိမ်းညွတ်မှုစနစ်နှင့်ကိုက်ညီသည့် Montreal Neurological Institute (MNI) template ကိုနေရာဒေသအလိုက်ပုံမှန်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။Talairach နှင့် Tournoux, 1988) အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသုံးပြီး nonlinear အတိုင်သဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တစ် 12-parameter သည်ဆှဖှေဲ့အသွင်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့် (Ashburner နှင့် Friston, 1999) ။ ကွန်ပျူတာအသွင်ပြောင်း parameters တွေကို4×4× 4mm ၏နောက်ဆုံး voxel အရွယ်အစား interpolating, အအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်တွေအားလုံးကိုလျှောက်ထားခဲ့သည် 3။ ပုံရိပ်တွေနောက်ပိုင်းတွင် Spatial တစ်ခု 8 မီလီမီတာ isotropic Gaussian kernel ကိုအတူပန်းခင်းလမ်းနှင့်ယာယီဆူညံသံကနေရရှိလာတဲ့အတွက်အချက်ပြ၏ကြိမ်နှုန်းမြင့်အစိတ်အပိုင်းများ attenuate တစ်ဒြပ် hemodynamic တုံ့ပြန်မှု-ချောမွေ့ function ကိုအတူ filtered ခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးကကျပန်းဆိုးကျိုးများ, အဖြစ်အပျက်-related စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ SPM99 (Friston et al နှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ , 1995a, 1999) တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်မှုတစ်ခုနှစ်ခု-Level လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၌တည်၏။ စမ်းသပ်မှု 1 များအတွက်ပထမဦးဆုံးအဆင့်မှာ, သီးခြားယေဘုယျ linear မော်ဒယ်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပြေးလေးအဖြစ်အပျက်အမျိုးအစားများ (nontargets, ပစ်မှတ်, တုံ့ပြန်မှု distractors နှင့် nonresponse distractors) မှအဆိုပါ BOLD တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဒြပ် hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုပါဝင်သည်ဟုအခြေခံ function ကိုအတူလုပ်ပါတယ်ခဲ့ကြသည် (နှစ်ခု gamma လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါဝင်သည်ဟုဆိတ်ကွယ်ရာ2စက္ကပြောင်းရွှေ့) နှင့်၎င်း၏ပထမဆုံးအမိန့် ယာယီဆင်းသက်လာ။ တစ်ဦးကဆနျ့ကငျြဘပုံရိပ်ကို distractor အကြိမ်ရေ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်ရန်သက်ဆိုင်ရာတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်တွက်ချက်ခဲ့သည်: မကြာခဏ distractors (မသက်ဆိုင်အမျိုးအစား) ထက်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော distractors သာ. ကြီးမြတ်။ တစ်ဦးချင်းစီဆနျ့ကငျြဘပုံရိပ်တွေထို့နောက်တနမူနာသုံးပြီးတစ်စက္ကန့်-Level ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့ဝငျခဲ့သညျ t စမ်းသပ်။ ရရှိလာတဲ့အကျဉ်းချုပ်စာရင်းအင်းမြေပုံမှာ thresholded ခဲ့သည် p <0.05 (မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်မပြင်ဆင်ရ), ပြီးတော့သေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်ဆုံးမခြင်း (SVC) အကျိုးစီးပွားခြောက်လ6မီလီမီတာအချင်းဝက်လုံးလုံးဒေသများ (ROIs) မှလျှောက်ထားခဲ့သည်။ သောကြောင့် တစ်ဦး အဆိုပါ striatum ကိုရည်မှတ်အယူအဆ, အ ROIs အောက်ပါနေရာများ (MNI ကိုသြဒိနိတ်) မှာဗဟိုပြုခဲ့ကြသည်: ညာဘက်နျူကလိယ accumbens, 12, 8, -8; ကျန်ရစ်နျူကလိယ accumbens, -12, 8, -8; ညာဘက် caudate, 12, 8, 12; လက်ဝဲ caudate, -12, 8, 12; ညာဘက် putamen, 24, 4, 4; နှင့်လက်ဝဲ putamen, -24, 4,4(သဖန်းသီး။ 2) ။ တစ်ဦးချင်းစီရွယ်မှသက်ဆိုင်ရာအဆိုပါသြဒီနိတ် (ထို Talairach daemons ဒေတာဘေ့စသဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောရှိသူများအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်Lancaster et al ။ , 2000), AFNI software ကိုအကောင်အထည်ဖော်အဖြစ် (ကော့, 1996), ကိုလည်း Talairach MNI ကိုသြဒိနိတ်သက်ဆိုင်တဲ့ကိုသြဒိနိတ်ပြောင်းဖို့အသုံးပြုခဲ့သည့်။ အသေးစားအသံအတိုးအကျယ်ဆုံးမပဲ့ပြင်စာရင်းအင်းအခြအနေနဲ့ကန့်သတ်အခါမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အကောင့်ဖို့ကျပန်း Gaussian လယ်ကွင်းသီအိုရီတစ်ခုကန့်သတ် application ဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦး အကျိုးစီးပွားသတ်မှတ်ထားသောဒေသ (Worsley et al ။ , 1996) ။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်, နှစ်ခုသောအခြေအနေများ (မကြာခဏနှင့်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော) အတွက် parameter သည်ခန့်မှန်းခြေတစ်ဦးချင်းစီ distractor အမျိုးအစား (တုံ့ပြန်မှုများနှင့် nonresponse) ၏ (ထို Scan ဖတ်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယုတ်ပြင်းထန်မှု၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဆိုလိုသည်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား) သတ်မှတ်ထားသော ROIs အတွင်း voxels ဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှခဲ့ကြသည် ကြောင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ် pSVC <0.05 ဆန့်ကျင်ဘက်အဘို့, မကြာခဏ distractors ထက်သာ။ ကြီးမြတ်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော distractors ။ အရံဖန်ရံခါအာရုံပျံ့လွင့်သူများသည်မကြာခဏအာရုံပျံ့လွင့်သူများထက်ပိုမိုသော activation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်apost ကို hoc အဆိုပါခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအခွအေနေရန်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် nonresponse distractors ၏တစ်ဦးချင်းစီပံ့ပိုးမှုများကို၏အကဲဖြတ်။ ဒါဟာခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအခြေအနေတုံ့ပြန်မှု distractors နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ nonresponse များအတွက် parameter သည်ခန့်မှန်းချက်အပေါ်တစ်ဦး pairwise နှိုင်းယှဉ်နှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု 1 များအတွက်တူညီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်မှု2ဘို့ကောက်ယူခဲ့ကွောငျးတစ်ဦးတည်းသာ distractor အမျိုးအစား (nonresponse) စမ်းသပ်မှု2၌ရှိ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မှလွဲ. သုံးမယ့်အစားလေးအဖြစ်အပျက်အမျိုးအစားများကိုလုပ်ပါတယ်ခဲ့ကြသည်: nontargets, ပစ်မှတ်များနှင့် distractors ။ ဤဒုတိယစမ်းသပ်မှုအတွက်လျှောက်ထားမပြုခဲ့စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့တုံ့ပြန်မှုများနှင့် nonresponse distractors ၏တစ်ဦးချင်းစီပံ့ပိုးမှုများကို၏အကဲဖြတ်။
နျူကလိယ accumbens, putamen နှင့် caudate အောက်ပါနှစ်နိုင်ငံ ROIs များ၏တည်နေရာများကို။ အဆိုပါ ROIs တစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံ template ကို MRI ၏ axial ကဏ္ဍများအပေါ်ပြသလျက်ရှိသည်။
သီးခြားဆန်းစစ်များတွင်စမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2ကနေပထမဦးဆုံးအဆင့်တစ်ဦးချင်းစီဆနျ့ကငျြဘပုံရိပ်တွေနှစ်နမူနာသုံးပြီးတစ်စက္ကန့်-Level ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့ဝငျခဲ့သညျ t saliency နှင့်အတူအမူအကျင့်ဆက်စပ်မှု၏အပြန်အလှန်အကဲဖြတ်ရန်စမ်းသပ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုချင်းစီမှဘာသာရပ်များကိုလူ ဦး ရေ (ဥပမာလူ ဦး ရေတစ်မျိုးတည်းမှအုပ်စုနှစ်စု) မှကောက်ယူသောကြောင့်၎င်းအုပ်စုများအကြားမည်သည့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုမဆိုတာ ၀ န်များကွဲပြားမှု (ဥပမာ - distractor အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု) ကိုရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်၊ (၁) (ခဏခဏအာရုံပြန့်ပွားသူများ - မကြာခဏအာရုံပျံ့လွင့်သူများ) × (သက်ဆိုင်မှု - ဆီလျှော်မှုမရှိ) နှင့် (1) (ခဏခဏအာရုံမပျံ့လွင့်မှု - မကြာခဏအာရုံပျံ့လွင့်စေသောအရာများ) × (ဆီလျှော်မှုမရှိ - သက်ဆိုင်မှု) ×အကျဉ်းချုပ်စာရင်းအင်းမြေပုံမှာ p <0.05 ပြီးတော့ SVC အထက် - ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်ဖော်ပြထားသောတူညီသော ၆ မီလီမီတာအချင်းဝက်လုံး ၀ ROIs ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်များတွင်ဘာသာရပ်များပြေးနှုန်းလျော့နည်းတစ်ခုထက်အမှားပျမ်းမျှဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ စမ်းသပ်မှု 1 မှာတုံ့ပြန်မှု distractors ဖို့တုံ့ပြန်မှုကြိမ်မကြာခဏတင်ဆက် distractors (± 683 msec ±အရှေ့တောင် = 27 ဆိုလို) အတွက်ထက်ကွာခဏပေးအပ် distractors (±အရှေ့တောင် = 623 ± 24 msec ဆိုလို) (အဘို့သိသိသာသာပိုရှည်ခဲ့ကြp <0.001; တွဲသည် t စမ်းသပ်မှု) ။ အဆိုပါမကြာခဏပြေး (±အရှေ့တောင် = 598 ± 20 msec ဆိုလို) နှင့်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောပြေးအတွက်ဗဟိုတြိဂံပစ်မှတ်မှတုံ့ပြန်မှုကြိမ် (± 579 msec ±အရှေ့တောင် = 19 ဆိုလို) (အစစမ်းသပ်မှု 1 အတွက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်p = 0.008; တွဲ t စမ်းသပ်မှု) ။ စမ်းသပ်မှု2မှာတော့မမကြာခဏပြေးအကြားအလယ်ပိုင်းတြိဂံပစ်မှတ်မှတုံ့ပြန်မှုကာလ၌သိသာထင်ရှားသည့်ခြားနားချက် (± 468 msec ±အရှေ့တောင် = 17 ဆိုလို) နှင့်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောပြေး (± 456 msec ±အရှေ့တောင် = 14 ဆိုလို) (ရှိခဲ့p = 0.132; တွဲ t စမ်းသပ်မှု) ။
အဆိုပါဆနျ့ကငျြဘများအတွက် fMRI ရွယ်ရလဒ်များကို, စမ်းသပ်မှု 1 နှင့်စမ်းသပ်မှု2အတွက်မကြာခဏ distractors ထက် သာ. ကြီးမြတ်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော distractors အတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် စားပွဲတင် 1။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် striatal ROIs (၆) ခု၏စမ်းသပ်မှု ၁ (အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်သောအာရုံထွေပြားများ) တွင် caudate နှင့် nucleus accumbens တွင်သိသာထင်ရှားသောလုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက် caudate နှင့်နျူကလိယ accucens အတွက် distractor အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအတွက်ဘာသာရပ်များ၏ parameter သည်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ (putamen ROIs တွင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားသော voxels များမပါ ၀ င်ပါ) အားလုံးသောအစုအဖွဲ့အားလုံးတွင်အကြီးမြတ်ဆုံးအချက်ပြမှုသည်အခြား distractor အမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကြီးမြတ်ဆုံး signal ကိုတိုင်းတာသည်။ အရံဖန်ရံခါတုံ့ပြန်မှု distractors အပါအဝငျသဖန်းသီး။ 3) ။ စမ်းသပ်မှု2များအတွက်သာဘယ်ဘက်နျူကလိယရွယ်သိသိသာသာ activation ပါရှိသော accumbens ။
သိသိသာသာ activated (pSVC မကြာခဏ distractors ထက်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော distractors သာ. ကြီးမြတ်သည့်ဆနျ့ကငျြဘအဘို့စမ်းသပ် 0.05 နှင့် 1 အတွက်≤ 2) striatal ROIs,
စမ်းသပ်မှု ၁ တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုပမာဏ (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျမ်းမျှအား၏ရာခိုင်နှုန်း) ကိုကိုယ်စားပြုသည့်တစ်ခုတည်းဘာသာရပ်များ၏ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုသည် ROIs အတွင်းသိသိသာသာ activated voxels များမှတဆင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အာရုံထွေထွေများထက်သာလွန်သည်။ သိသာထင်ရှားသော activation နှင့်အတူ ROIs နှစ်နိုင်ငံနျူကလိယ accumbens နှင့် caudate ခဲ့ကြသည်။ တုန့်ပြန်ချက်လိုအပ်ချက်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူမကြာခဏအာရုံပျံ့လွင့်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကခဏခဏအာရုံပြန့်ပွားသူများအတွက်ကြံစည်မှုကိုခန့်မှန်းထားသည်။A) ။ (ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော distractors တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်အားဖြင့်ခွဲခြားခြင်း, ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောတုံ့ပြန်မှု distractors မှဆွေမျိုးခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော nonresponse distractors များအတွက်ဆနျ့ကငျြဘခန့်မှန်းချက်ကြံစည်နေကြတယ်B) ။ ဘားကွက်ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှနှင့် SEs ကိုယ်စားပြုသည်။ *p <0.05; **p <0.005; ***p <0.001 ။
နှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်များအကြားအပြုအမူဆက်စပ်မှုနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ fMRI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကိုအတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် စားပွဲတင် 2။ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုအတွက် (ခဏခဏအာရုံပြံ့လှည့်မှုများ - မကြာခဏအာရုံပျံ့လွင့်စေသောအရာများ) × (သက်ဆိုင်ရာ - ဆီလျှော်မှုမရှိခြင်း) အတွက် caudate တွင်သိသိသာသာတက်ကြွမှုရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမကအခြား ROI activations ရှိခဲ့ပါတယ်။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (မကြာခဏဆိုသလိုအာရုံပြန့်လွင့်မှုများ - မကြာခဏအာရုံပျံ့လွင့်သူများ) × (ဆီလျှော်မှုမရှိ - သက်ဆိုင်မှုရှိ) သည်သိသိသာသာသက်ဝင်လှုပ်ရှားသော ROIs များမဖြစ်ပေါ်စေပါ။
differential activated အကျိုးစီးပွား Striatal ဒေသများ (psvc <0.05) ဆနျ့ကငျြဘနှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်များအကြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုအားဖြင့်, မကြာခဏ distractors ထက်သာ။ ကြီးမြတ်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော distractor
fMRI အသုံးပြုခြင်း, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု striatal လှုပ်ရှားမှု nonrewarding လှုံ့ဆော်မှုများ၏ saliency အားဖြင့် modulated ခံခဲ့ရပုံကိုလူ့စုံစမ်းစစ်ဆေး။ လှုံ့ဆော်မှုအဓိက (အာရုံစူးစိုက်မှုဆွဲ, ဆိုလိုသည်မှာ) မမျှော်လင့်ဘဲနှင့်နှိုးဆွသောသူဖြစ်ရမည်ဆင်ခြင်၏။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာဘာသာရပ်များသူတို့ရဲ့အာရုံစိုကျဖို့ဒီဇိုင်းအနေနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစဉ်ဆက်မပြတ်စွမ်းဆောင်ရည်တာဝန်ဖျော်ဖြေသို့သော်ဤဗဟိုလုပ်ငန်းတာဝန်ဖျော်ဖြေချိတ်ဆက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအကျိုးစီးပွားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အကျိုးစီးပွားများ၏လှုံ့ဆော်မှုဗဟိုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် nontargets တချို့၏နောက်ခံ flickering distractor လှုံ့ဆော်မှုရှိကြ၏။ ကြိမ်နှုန်း ( ပို. မကြာခဏလျော့နည်းအဓိက) နှင့်အမူအကျင့်ဆက်စပ်မှု: Saliency နှစ်ခုရှုထောင့်ကိုဖြတ်ပြီးခြယ်လှယ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များကိုအရေးပါသောအင်္ဂါရပ်အကြိမ်ရေမှတဆင့် distractor လှုံ့ဆော်မှုမျှော်လင့်ထား၏ခြယ်လှယ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုများတွင် distractor ဖြစ်ပျက်မှု၏ကြိမ်နှုန်း distractor မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အရှင် saliency ပြောင်းလဲပစ်ရန်ပြေးအကြား modulated ခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်များကိုပိုမိုမကြာခဏပေါ်ပေါက်တဲ့အခါသူတို့ကပိုမျှော်လင့်ထားသည့်နှင့်အောက်သာအဓိကဖြစ်လာသည်။ ဆက်တိုက်ဖြစ်ရပ်များအကြားရှည်လျားကြားကာလနှင့်အတူခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောလှုံ့ဆော်မှုမမျှော်လင့်ဘဲထို့ကြောင့်ပိုပြီးအဓိကဖြစ်ကြသည်။ (ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောများ၏လက်ခံအဓိပ္ပာယ်ဘက်ကလိုက်လျောညီထွေဆက်မက်ကာသီ et al ။ , 1997; Clark က et al ။ , 2000; Kirino et al ။ , 2000), ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော distractors <စမ်းသပ်မှု၏ 10% အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင်တည်နေရာ၊ အချိန်အတိအကျနှင့် distractor အမျိုးအစားများအပါအ ၀ င် distractor ဂုဏ်သတ္တိများကိုတစ် ဦး ချင်းစီတိုင်းတွင် pseudorandomized ခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှု (၁) တွင်ရံဖန်ရံခါအာရုံပျံ့လွင့်သူများအတွက်တုံ့ပြန်မှုအချိန်များသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုကိုသရုပ်ပြပြီးမကြာခဏအာရုံပျံ့လွင့်သူများထက်သိသိသာသာပိုကြာသည်။
ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အပြင်, ဦးစားအာရုံစိုက်နိုင်စွမ်း salience stimulus ဖို့ကိုအလွန်စေတယ်။ saliency ၏ဤရှုထောင့် (အခ်ါလှုံ့ဆော်မှုစရိုက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာဆိုလိုသည်မှာ) (နှိုးဆွအပြုအမူဆီလျှော်မှု၏အခြေခံပေါ်မှာဆိုလိုသည်မှာ) ကအမူအကျင့်အခြေအနေတွင်အပေါ်မှီခိုသို့မဟုတ်အပြုအမူအခြေအနေတွင်၏လွတ်လပ်သောနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ (Downar et al ။ , 2002) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမူအကျင့်အခြေအနေတွင်ခြယ်လှယ်။ စမ်းသပ်မှု 1 ခုနှစ်, distractors အလားအလာတုံ့ပြန်မှု၏သီလအားဖြင့်အပြုအမူသက်ဆိုင်ရာခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှု2ခုနှစ်, distractors task ကိုများအတွက်အရေးမကြီးခဲ့ကြသောကြောင့် distractors အပြုအမူဆီလျှော် ရှိ. , ဘာသာရပ်များသူတို့ကိုတုံ့ပြန်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဘာသာရပ်များသူတို့ distractors "သတိပြုမိ" ကြောင်း, သို့သော်, သတင်းပို့ခဲ့ပေ။ စမ်းသပ်မှု2အတွက် distractors ကွာခဏပေးအပ်ခဲ့ကြတဲ့အခါသူတို့နေဆဲကြောင့်အနက်ရောင်နောက်ခံပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးအရောင်ဆနျ့ကငျြဘ (လက်ရှိတာဝန်အတွက်လျော့နည်းခြားနားအပြာရောင်ပုံစံမျိုးစုံဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) နှင့်၎င်းတို့၏ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသဘောသဘာဝအပါအဝင်အပြုအမူအခြေအနေတွင်၏လွတ်လပ်သော features တွေ၏အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြ ။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုများအခ်ါဂုဏ်သတ္တိများအပြင်, စမ်းသပ်မှု 1 အတွက် distractors သူတို့ရဲ့အလားအလာအပြုအမူအကျိုးဆက်များ၏ရလဒ်အဖြစ်၎င်းတို့၏ saliency မှတစ်ဦးကဆက်ပြောသည်အတိုင်းအတာရှိခဲ့ပါတယ်။ ခလုတ်ကိုစာနယ်ဇင်းကိုသာတုန့်ပြန် (တြိဂံ) distractors မှဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပေမယ့်အရေးကြီးတာက, စမ်းသပ်မှု 1 အတွက် distractor အမျိုးအစားများ (တုံ့ပြန်မှုများနှင့် nonresponse) ၏နှစ်ဦးစလုံး, ခဏ, လက်ရှိတာဝန်ကြားဖြတ်အဆိုပါ distractor မှအရင်းအမြစ်များကိုလွှဲများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကတုံ့ပြန်ရန်ဘာသာရပ်များလိုအပ်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များနျူကလိယ accumbens အတွက်လှုပ်ရှားမှုထုတ်ဖေါ်ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအပြုအမူသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ခဲ့သည်သာအခါ caudate စုဆောင်းခံခဲ့ရသော်လည်း, ထိုအမြင်ပတ်ဝန်းကျင် (flickering distractors ၏ဆိုလိုသည်မှာရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်) တွင်အပြောင်းအလဲများနှိုးဆွသော, မျှော်လင့်မထားတဲ့တုန့်ပြန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှုဤပုံစံများယခင်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ Caudate အာရုံခံ (တွေကိုနှင့်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ပေမယ့်ဒီလှုံ့ဆော်မှု task ကို၏လွတ်လပ်သောအခါတုံ့ပြန်မှုပုံမှန်အားဖြင့်မြင်ကြကြသည်မဟုတ်Rolls et al ။ , 1983) ။ Aosaki et al ။ (1994) ကို caudate အတွက်အာရုံခံလေ့ကျင့်ရေးရှေ့တော်၌ cue တုံ့ပြန်ကြဘူးကြောင်းအစီရင်ခံ; သို့သော်သူတို့က cue အချက်ပြမှုများကိုလာမည့်ဆုလာဘ်များနှင့်အရှင် Initiative ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းလေ့လာသင်ယူပြီးနောက် cue တုံ့ပြန်လုပ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်နျူကလိယ (တာဝန်ဆက်စပ်မှုချို့တဲ့လျှင်ပင်, အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုနှိုးဆွသောတုံ့ပြန် accumbensWilliams က et al ။ , 1993) ။ ကျနော်တို့ကို (putamen အများဆုံးတိုက်ရိုက်မော်တာထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းအကြံပြုဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီသောအရာ, အ putamen အတွက်လှုပ်ရှားမှုမျှသိသာ Module လေ့လာတွေ့ရှိအလက်ဇန်းဒါးနှင့် Crutcher, 1990) မဟုတ်ဘဲ se နှုန်း salience ထက်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာကနေကျနော်တို့လူ့ striatum (caudate နှင့်နျူကလိယ accumbens) ဆုလာဘ်ထက်အခြားအဓိကဖြစ်ရပ်များ processing အတွက်အခန်းကဏ္ဍ, ကစားပေမယ့်တုန့်ပြန်သည့် striatum တစ်လျှောက်လုံးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း။ ကောက်ချက်ချ Redgrave et al ။ (1999) ကို striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲထုတ်မမျှော်လင့်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုရန်, အာရုံစူးစိုက်မှုသို့မဟုတ်အပြုအမူအရင်းအမြစ်များကိုပြောင်းတဲ့ signal ကိုပေးသည်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်အဆိုပြုထား။ ဒီသီအိုရီများနှင့်အညီ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုတစ်ဦးအမူအကျင့် switch ကိုရူးနှမ်းနေသည်အခါ caudate တုံ့ပြန်သော်လည်းတစ်ခုအာရုံကို switch ကို, ရူးနှမ်းနေသည်အခါနျူကလိယ accumbens တုံ့ပြန်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအနက်ဘာသာရပ်များစမ်းသပ်မှု 1 အတွက် distractors တုံ့ပြန်စမ်းသပ်မှု2အတွက် distractors တုံ့ပြန်မထက်ပိုပြီးကြိုးကွောငျးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအမြင်ထဲမှာ, differential ကို striatal activation (caudate) ပြည်တွင်းရေးဆုလာဘ်ပြည်နယ်တစ်ခုကွာခြားချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအနက်ကိုပုခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော nonresponse distractors ထက်တုံ့ပြန်မှု distractors ကြောင်းပေးထားမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်, အကြီးမြတ်ဆုံး dorsal နှင့် ventral striatal လှုပ်ရှားမှုရူးနှမ်း။ ပြည်တွင်းရေးဆုလာဘ်အယူအဆစစ်မှန်တဲ့ခဲ့ကြသည်လျှင်, တုံ့ပြန်ဘဲ, implausible ပုံရသည်တဲ့မြင်ကွင်းတုံ့ပြန်ထက်ပိုပြီးကြိုးဖြစ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော nonresponse distractors ပြီးနောက်အကြီးမြတ်ဆုံးအချက်ပြမှုကိုလည်း (မော်တာတားစီးအတွက်၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုထွက်အုပ်ချုပ်မရနိုင်ပေမယ့်) စမ်းသပ်မှု 1 အတွက် striatal လှုပ်ရှားမှုမော်တာကွပ်မျက်ရန်တွေကပေါ်ကနေမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအထောက်အထားပေးပါသည်။
ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များအနက် salience distractor အကြိမ်ရေများအပြောင်းအလဲတချို့မှတဆင့်ကြိုးကိုင်ဖြစ်ခြင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အကြိမ်ရေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကွဲပြားခြားနားအနက်နိုင်စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဘာသာရပ်များနှစ်ဦးစလုံးမကြာခဏနှင့်ကွာခဏနှစ်ခုလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုလိုင်းများအကြားအကူးအပြောင်းခဲ့ရတယ်။ ကြိမ်နှုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုထို့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ salience ထက်တုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်ရေးပြောင်းလဲနေတဲ့နှုန်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ ဖြစ်ပျက်မှု၏၎င်း၏ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲထက်အခြားနည်းလမ်းလှုံ့ဆော်မှု saliency ကြိုးကိုင်အနာဂတ်လေ့လာမှုများဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နိုင်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရန်, striatum, ပြောင်းလဲနေတဲ့တုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်မှု၏နိုင်တဲ့ coding မှုနှုန်းနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
(အဓိကလှုံ့ဆော်မှု infrequent မှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုထိုကဲ့သို့သော oddball Paradigm ကဲ့သို့သောအခြားနည်းလမ်းတွေအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြပေမယ့် striatal လှုပ်ရှားမှုသည်ဤလေ့လာမှုများအစီရင်ခံရသေးဆက်မက်ကာသီ et al ။ , 1997; Clark က et al ။ , 2000; Kirino et al ။ , 2000; ကာဇီ et al ။ , 2001) ။ အာရုံစူးစိုက်မှုသို့မဟုတ်အပြုအမူတစ်ခု switch ကိုထုတ်ယူသော striatum codes တွေကိုမျှော်လင့်မထားတဲ့ဖြစ်ရပ်များဆိုပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအကြံပြုသည်အတိုင်း, ပြီးတော့ oddball Paradigm striatal Active evoking များအတွက်ထိရောက်သောမဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမ switch ကိုရူးနှမ်းခဲ့ဒါဖျောပွ oddball Paradigm ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီလှုံ့ဆော်မှုအာရုံစိုက်မှုများ၏အာရုံထဲမှာထင်ရှား။ , အာရုံစူးစိုက်မှု၏အာရုံထဲတွင်လှုံ့ဆော်မှုတင်ပြခြင်းအားဖြင့်, ထိုဘာသာရပ်များတစ်ဦးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတည်နေရာနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းအချိန်ကပေါ်လာဖို့နှိုးဆွမျှော်မှန်းထားသည်။ သူတို့တာဝန်ရှိအခြားလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောကြပေမဲ့, စိတ်ဝင်စားမှုများ၏လှုံ့ဆော်မှုတာဝန်ပြင်ပပေးအပ်လျှင်သူတို့ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်မမျှော်လင့်ဘဲကြဘူး။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးဆွမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုနှစ်ဦးစလုံး modulate ခွင့်အာရုံစိုက်မှုများ၏အာရုံ၏အပြင်ဘက် distractors တင်ပြခြင်းဖြင့်ထိုအရှက်ကြောက်ရှောင်ကြဉ်။
ဒါဟာ fMRI အတွက်တိုင်းတာသည့်အချက်ပြမှု postsynaptic Spike ထက် presynaptic လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူပိုပြီးဆက်စပ်ဖြစ်လေ့ပေးသောဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု, (ပြောင်းလဲမှုများတစ်ခုသွယ်ဝိုက်အတိုင်းအတာကြောင်းကိုမှတ်သားရပါမည်Logothetis et al ။ , 2001) ။ အဆိုပါ BOLD signal ကိုတိကျတဲ့ဆဲလ်အမျိုးအစားများအတွက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မရနဲ့တိကျတဲ့ neurotransmitter လွှတ်ပေးရန်တစ်တိုင်းတာခြင်းမဟုတ်ပါနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ [ဥပမာလုပ်သူများတက်ကြွ interneurons (TANs) သို့မဟုတ်အလတ်စား spiny projection အာရုံခံ] သို့မဟုတ် dopamine ဂီယာအတွက်တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲမှုများ striatum အတွက်တိကျတဲ့အာရုံခံမှပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုလင့်ထားသည်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ BOLD signal ကို presynaptic လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူပိုပြီးဆက်စပ်သောကွောငျ့သို့သော်သည်, striatum အတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာ Active ဖြစ်နိုင် striatal projection အာရုံခံ၏ဆူးနှုန်းထားများကိုယ်စားပြုကြပါဘူး။ TANs (အားလုံး striatal ဆဲလ် ~2% ပါဝင်Pisani et al ။ , 2001); ထို့ကြောင့်က TANs striatal လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအစီရင်ခံအပြောင်းအလဲများကိုဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ယူဖြစ်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်များအဓိကတုံ့ပြန်ကြပါရာ Dopaminergic သွင်းအားစု, (Horvitz, 2000)) အဓိကဆက်စပ် (အားကောင်းတဲ့ cortical သွင်းအားစုချဲ့ခြင်းနှင့်အားနည်း (nonsalient related) cortical သွင်းအားစု (dampening အားဖြင့် striatum အတွက် convergence glutamatergic cortical သွင်းအားစုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်Nicola et al ။ , 2000; Horvitz, 2002) ။ ဒါဟာအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်အတွက် striatum အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အချက်ပြမှုအပြောင်းအလဲများအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၌, dopamine သွင်းအားစု innervate တစ်ခုလုံးကို striatum ဖြစ်သော်လည်းစမ်းသပ်ချက်များအကြား differential striatal activation အပြုအမူဆက်စပ်မှုတို့အတွက် coding ကွဲပြားခြားနားသော cortical သွင်းအားစုများစုဆောင်းမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်နိုင်တယ်။ လက်ရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် striatum ဖို့ကန့်သတ်ခဲ့သည်; သို့သော်သူက cortical ဒေသများလည်းအလားတူလုပ်ငန်းတာဝန်အခြေအနေများအောက်တွင်စုဆောင်းထားတဲ့ဆနျးစစျဖို့အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို saliency အပြောင်းအလဲနဲ့မှဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အနေဖြင့် striatum ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတိုးချဲ့။ အထူးသကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာနျူကလီးယပ် caudate လှုပ်ရှားမှုပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်လှုံ့ဆော်မှု၏အမူအကျင့်ဆက်စပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်သော်လည်း, မမျှော်လင့်ဘဲ arousal ဖြစ်ရပ်များ coding ထဲမှာအခန်းကဏ္ဍ accumbens ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်အယူအဆဟာ striatum ရဲ့ဆုလာဘ်သီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်မဟုတ်ပါဘူး။ မျှော်လင့်မထားတဲ့ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှု (မကြာခဏဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာမှုအတွက်အမှုဖြစ်တယ်ကဲ့သို့) အထူးသဖြင့်တစ်ဦးအစားအစာ-ဆုံးရှုံးတိရိစ္ဆာန်ရန်, အမူအကျင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်အဓိကဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဖြစ်ပွားနေသောအပြုအမူတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်လောင်ဖို့ကြားဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဆုလာဘ်ထက်ပိုသို့မဟုတ်ပင်လှုံ့ဆော်မှုလူ့ striatum codes တွေကိုအတွက်လှုပ်ရှားမှုအလားအလာဆုလာဘ်မှဦးဆောင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ ယင်းအစားအဆိုပါ striatal system ကိုမဆိုအဓိကလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ subserve ပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ပြောင်းလဲကြပေမည်။
မေလ 5, 2003 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူဇူလိုင်လ 10, 2003 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံဇူလိုင်လ 16, 2003 ။
ဤလုပ်ငန်းကို GSB မှကနျြးမာရေးထောက်ပံ့ရေး RO1 EB002635 နှင့် K08 DA00367 အမျိုးသား Institutes ကထောက်ခံခဲ့သည်
စာပေးစာယူဒေါက်တာဂရက်ဂိုရီအက်စ် Bern, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံဌာန, 1639 ပီယပ် Drive ကို, Woodruff သတိရအောက်မေ့သုတေသနအဆောက်အအုံ Suite 4000, အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ 30322 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
အာရုံကြောသိပ္ပံ 2003-0270 / 6474 / 03-238092 $ 06 / 15.00 များအတွက်မူပိုင်ခွင့်©0Society က
Aosaki T, Tsubokawa H, Ishida A, Watanabe K, Graybiel AM, Kimura M (1994) အိုင်းရွန်း၏ striatum ရှိတက်ကြွလှုပ်ရှားသောအာရုံခံဆဲလ်များ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံခံကိရိယာအခြေအနေတွင်ပုံမှန်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို Neurosci 14: 3969-3984 ။
Becerra L ကို, Breiter HC, ပညာရှိ R ကို, Gonzalez RG, Borsook: D (2001) noxious အပူလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဆုကြေး circuitry activation ။ အာရုံခံဆဲလျ 32: 927-946 ။
Bern GS, လူယာသည် SM, Pagnoni, G, ဂူ PR စနစ် (2001) ကြိုတင်ခန့်မှန်းဆုချမှလူ့ဦးနှောက်ကိုတုန့်ပြန် modulates ။ J ကို neuroscience 21: 2793-2798 ။
ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများမျှော်မှန်းခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု၏ Breiter HC, အာရုန်ငါ Kahneman: D, Dale တစ်ဦးက, Shizgal P ကို ​​(2001) Functional ပုံရိပ်။ အာရုံခံဆဲလျ 30: 619-639 ။
Caan W က, Perrett ပစ, Rolls ET (1984) ကိုပြုမူမျောက်အတွက် striatal အာရုံခံ၏တုံ့ပြန်ချက်။2။ အဆိုပါ caudal neostriatum အတွက် Visual အပြောင်းအလဲနဲ့။ ဦးနှောက် Res 290: 53-65 ။
ပစ်မှတ်ဖြစ်နိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများမှ prefrontal cortex ၏ Casey BJ, Forman SD, Franzen P ကို, Berkowitz တစ်ဦးက, Braver TS, Nystrom LE, သောမတ်စ် KM, Noll DC က (2001) အာရုံ: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှု။ Hum ဦးနှောက် Mapp 13: 26-33 ။
အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ် fMRI သုံးပြီးရှားပါးအမြင်အာရုံပစ်မှတ်နှင့် distractor လှုံ့ဆော်မှုမှ Clark က VP, Fannon S ကိုလိုင်က S, Benson R ကို, Bauer L ကို (2000) တုံ့ပြန်ချက်။ J ကို Neurophysiol 83: 3133-3139 ။
ကော့ RW (1996) AFNI: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု neuroimages ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် visualization များအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲ။ ကွန်ပျူတာက Biomed Res 29: 162-173 ။
Delgado MR, Nystrom LE, Fissell ကို C, Noll, DC, Fiez ဂျေအေ (2000) ကို striatum အတွက်ဆုချခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုခြေရာခံခြင်းသည်။ J ကို Neurophysiol 84: 3072-3077 ။
Downar J ကို, Crawley က AP, Mikulis DJ သမား, Davis က KD (2002) မျိုးစုံအာရုံခံပုံစံများကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးကြားနေအပြုအမူအခြေအနေတွင် salience stimulus မှအထိခိုက်မခံတစ်ဦးက cortical ကွန်ယက်ကို။ J ကို Neurophysiol 87: 615-620 ။
Elliott သည် R ကို, Newman က JL, Long oa, Deakin JFW (2003) လူသားတွေအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်ပေးရန် striatum နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်တုန့်ပြန်မှုပုံစံများ Differential: တစ် parametric အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ J ကို neuroscience 23: 303-307 ။
Friston KJ, Frith CD ကို, Turner R ကို, Frackowiak RSJ (1995a) fMRI နှင့်အတူပြောင်းလဲနေသောဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု Characterizing: တစ် multivariate ချဉ်းကပ်နည်း။ NeuroImage 2: 166-172 ။
အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်အတွက် Friston KJ, Holmes က AP, Worsley KJ, Poline JB, Frith CD ကို, Frackowiak RSJ (1995b) စာရင်းအင်း parametric မြေပုံ: အထွေထွေ linear ချဉ်းကပ်နည်း။ Hum ဦးနှောက် Mapp 2: 189-210 ။
Friston KJ, Holmes က AP, Worsley KJ (1999) လေ့လာမှုတစ်ခုဖွဲ့စည်းဘယ်နှစ်ယောက်ဘာသာရပ်များ? NeuroImage 10: 1-5 ။
အာရှရပင်လေး, အ neostriatum အတွက်အခ်ါအဖွဲ့အစည်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ Garcia က-Munoz M က, Linder JC, Manley က MS, Martone ME, Young က SJ (1995) Element တွေကို။ ခုနှစ်တွင်: အ Basal ganglia (Houk JC, Davis က LJ, Beiser DG, eds), စစ 51-96 အတွက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ & Models ။ ကင်းဘရစ်, MA: MIT က။
မျောက် caudate အာရုံခံ II ၏ Hikosaka အို Sakamoto M က, Usui S ကို (1989) Functional ဂုဏ်သတ္တိများ။ အမြင်အာရုံနှင့်အာရုံတုံ့ပြန်မှု။ J ကို Neurophysiol 61: 799-813 ။
အဓိကမဟုတ်တဲ့ဆုလာဘ်ဖြစ်ရပ်များမှ Horvitz JC (2000) Mesolimbocortical နှင့် nigrostriatal dopamine တုံ့ပြန်မှု။ neuroscience 96: 651-656 ။
အဆိုပါ striatum မှ glutamatergic sensorimotor နှင့်မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုး input ကိုအချက်ပြမှုများ၏ Horvitz JC (2002) Dopamine Gates ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 137: 65-74 ။
ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု: ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောပစ်မှတ်နှင့်အမြင်အာရုံပစ်မှတ်ထောက်လှမ်း task ထဲမှာဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် evoked Kirino အီး, Belger တစ်ဦးက, Goldman-Rakic ​​P ကို, ဆက်မက်ကာသီက G (2000) Prefrontal activation ။ J ကို neuroscience 20: 6612-6618 ။
တစ်ငွေကြေးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးတာဝန်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု Knutson B, Westdorp တစ်ဦးက, ခိုင်ဆာအီး, Hommer: D (2000) FMRI visualization ။ NeuroImage 12: 20-27 ။
တိုးမြှင့်ငွေကြေးဆုလာဘ်၏ Knutson B ကိုအဒမ် CM, Fong သည် GW, Hommer: D (2001a) ရှိလာရွေးချယ်နျူကလိယ accumbens စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ J ကို neuroscience 21: RC159 (1-5) ။
Knutson B, Fong သည် GW, အဒမ် CM, Varner JL, Hommer: D (2001b) ဖြစ်ရပ်-ဆက်စပ် fMRI နှင့်အတူဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်၏ Dissociation ။ NeuroReport 12: 3683-3687 ။
Knutson B, Fong သည် GW, Bennett က SM, အဒမ် CM, Hommer: D (2003) mesial prefrontal cortex ပုဒ် monetarily ကြိုးရလဒ်များတစ်ဒေသ: လျင်မြန်စွာဖြစ်ရပ်-ဆက်စပ် fMRI နှင့်အတူစရိုက်လက္ခဏာတွေ။ NeuroImage 18: 263-272 ။
အဆိုပါ fMRI signal ကို၏အခြေခံ၏ Logothetis NK ပေါလုသည်ဂျေ, Augath M က, Trinath T က, Oeltermann တစ်ဦးက (2001) Neurophysiological စုံစမ်းစစ်ဆေး။ သဘာဝတရား 412: 150-157 ။
အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ဆက်မက်ကာသီ, G, Luby M က, ဂိုး J ကို, Goldman-Rakic ​​P ကို ​​(1997) ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောဖြစ်ရပ်များယာယီလူ့ prefrontal နှင့် parietal cortex ကိုသက်ဝင်။ J ကို Neurophysiol 77: 1630-1634 ။
အဆိုပါ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှား၏ Nicola သည် SM, Surmeier DJ သမား, Malenka RC (2000) Dopaminergic မော်ဂျူ။ Annu ဗြာ neuroscience 23: 185-215 ။
ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏အမှားများကိုမှသော့ခတ်လူ့ ventral striatum အတွက် Pagnoni, G, Zink CF, မွန်တဂူ PR စနစ်, Bern GS (2002) လုပ်ဆောင်ချက်။ နတ် neuroscience 5: 97-98 ။
ဆယ်လူလာယန္တယားများနှင့်အမူအကျင့်ဆက်စပ်မှု: striatal function ကိုထိန်းချုပ်မှုအတွက်လုပ်သူများ-တက်ကြွအာရုံခံ၏ Pisani တစ်ဦးက, Bonsi P ကို, Picconi B, Tolu M က, Giacomini P ကို, Scarnati အီး (2001) အခန်းက္ပ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 25: 211-230 ။
Ravel က S, Legallet အီး, Apicella P ကို ​​(1999) လုပ်သူများမျောက် striatum အတွက်တက်ကြွစွာအာရုံခံဦးစားလှုံ့ဆော်မှု appetitive တုံ့ပြန်ကြပါဘူး။ Exp ဦးနှောက် Res 128: 531-534 ။
Redgrave P ကို, Prescott တီဂျေ, Gurney ငွေကျပ် (1999) ဆုလာဘ်အမှားအချက်ပြဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်တို-အောင်းနေချိန် dopamine တုံ့ပြန်မှုလား? ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 22: 146-151 ။
Rolls ET သည်ပြုမူနေမျောက်အတွက် striatal အာရုံခံ၏ Thorpe SJ, ကထုတ်တဲ့ Maddison SP (1983) တုံ့ပြန်ချက်။ အဆိုပါ caudate နျူကလိယ၏ဗြဲဌာနမှူး။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 7: 179-210 ။
Schultz dopamine အာရုံခံ၏ W က (1998) ခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ J ကို Neurophysiol 80: 1-27 ။
မျောက် orbitofrontal cortex နဲ့ Basal ganglia အတွက် Schultz W က, Tremblay L ကို, Hollerman JR (2000) ဆုကြေးအပြောင်းအလဲနဲ့။ Cereb Cortex 10: 272-284 ။
olfactory ခွဲခြားဆက်ဆံမှုသင်ယူမှုစဉ်အတွင်း ventral striatum အတွက် Setlow B, Schoenbaum, G, Gallagher M (2003) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော encoding က။ အာရုံခံဆဲလျ 38: 625-636 ။
ဆုလာဘ်-oriented saccadic မျက်စိလှုပ်ရှားမှုထဲမှာမျောက် caudate အတွက်လုပ်သူများတက်ကြွအာရုံခံ၏ Shimo Y ကို, Hikosaka အို (2001) အခန်းက္ပ။ J ကို neuroscience 21: 7804-7814 ။
လူ့ဦးနှောက်၏ Talairach J ကို, Tournoux P ကို ​​(1988) Co-ပြို stereotaxic Atlas ။ စတုဂတ်, ဂျာမနီ: Thieme ။
Williams က GV, Rolls ET, Leonard CM, Stern ပာကို C (1993) ကိုပြုမူနေဟာ Macaque ၏ ventral striatum အတွက်အာရုံခံတုံ့ပြန်မှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 55: 243-252 ။
ဆုကြေးနှင့်အပြစ်ဒဏ်ပြောင်းပြန်သင်ယူစဉ်အတွင်းလူ့ Striatal နေရင်မြန်အောင်၏ Dopamine မှီခိုမှုအထူထောင် ဦးနှောက် Cortex, 1 မတ်လ 2014, 24 (3): 633-642
ဆုကြေး၏မရှိခြင်းအတွက်ကြိုးပမ်းမှု-အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ချက်-Making အတွက် Striatum ၏အခန်းက္ပ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,5ဖေဖော်ဝါရီလ 2014, 34 (6): 2148-2154
Fact နှင့်စိတ်ကူးယဉ် - ဘယ်လို paratextual သတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်များပုံသွင်း လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ, 1 ဇန်နဝါရီလ 2014,9(1): 22-29
အတော်များများကဦးထုပ်: အ striatum နှင့် premotor cortex အတွက် intratrial နှင့်ဆုလာဘ်အဆင့်ကို-မှီခို BOLD လှုပ်ရှားမှု Neurophysiology ၏ဂျာနယ်, 1 အောက်တိုဘာလ 2013, 110 (7): 1689-1702
နျူကလိယ Accumbens လုပ်ဆောင်ချက် Salience ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ Dissociates: လူ့ Intracranial မှတ်တမ်းများမှအထောက်အထား အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 15 မေလ 2013, 33 (20): 8764-8771
Leptin လူသားတွေဟာရေရှည်စိတ်ဖိစီးမှုမှ Dopamine တုံ့ပြန်ချက်ထိန်းညှိ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 31 အောက်တိုဘာလ 2012, 32 (44): 15369-15376
ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းပင်ကိုစရိုက်ကကြိုးဖြစ်ပါသည် PNAS, 22 မေလ 2012, 109 (21): 8038-8043
လှုပ်ရှားမှုလူ့ Striatum နှင့် Dopaminergic Midbrain အတွက် Anticipatory ကိုယ်စားပြုမှုအတွက် valence လက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 25 မေလ 2011, 31 (21): 7867-7875
dopamine ကုထုံး၏ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့် ventral နှင့် dorsal striatum-mediated သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု - အလုပ်လုပ်သော MRI မှပံ့ပိုးမှု ဦးနှောက်, 1 မေလ 2011, 134 (5): 1447-1463
မိဘပညာရေးလူကြီးအတွက် Corticostriatal လုပ်ဆောင်မှုခန့်မှန်း ဦးနှောက် Cortex, 1 ဧပြီလ 2011, 21 (4): 896-910
ဆုကြေး၏မရှိခြင်းအတွက် Dopaminergic Midbrain ဒေသများ၏ Task ကို-Load-မှီခို Activation အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 30 မတ်လ 2011, 31 (13): 4955-4961
တစ်ဦး Axiomatic မော်ဒယ်နှင့်အတူဆုကြေးဘီဘာအိုမှားယွင်းနေသည် Hypothesis စမ်းသပ် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,6အောက်တိုဘာလ 2010, 30 (40): 13525-13536
လူ့ Basal Ganglia Module တိုကျရိုကျ-Posterior ဆက်သွယ်မှုကိုအာရုံစို Shift စဉ်အတွင်း အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 21 ဇူလိုင်လ 2010, 30 (29): 9910-9918
Episode ဆုံးဖြတ်ချက်များစဉ်အတွင်း Striatal တုံ့ပြန်ချက်၏ functional သိသိသာသာ: Recovery ကိုသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်မှီ? အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 31 မတ်လ 2010, 30 (13): 4767-4775
တားစီးစိတ်ထားတစ်ခုသမိုင်းနှင့်အတူပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်ဆုကြေးထုတ်ယူခြင်း၏အာရုံကြောဆက်စပ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 1 သြဂုတ်လ 2009, 20 (8): 1009-1018
Ventral နှင့် Dorsal Frontoparietal နှင့် Basal Ganglia-cortical ကွန်ယက်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-Driven ကျအောင်နှင့်မျှော်လင့်ခြင်း interaction အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 8 ဧပြီလ 2009, 29 (14): 4392-4407
stimulus-ရလဒ်နှင့် stimulus-တုံ့ပြန်မှုအစည်းအရုံးများလားရာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားဘို့အာရုံကြောအလွှာ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 29 အောက်တိုဘာလ 2008, 28 (44): 11196-11204
အဲဒီအစား Salience Active လူ့နျူကလိယ Accumbens နှင့် Medial Prefrontal Cortex သန်းပျော်ရွှင်မှု Neurophysiology ၏ဂျာနယ်, 1 စက်တင်ဘာလ 2007, 98 (3): 1374-1379
လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ Contextual ထုတ်ယူခြင်းဖို့ပြန်ကြားရေး-သီအိုရီချဉ်းကပ်: Prefrontal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ထံမှအထောက်အထား ဦးနှောက် Cortex, 1 စက်တင်ဘာလ 2007, 17 (suppl_1): i51-i60
လူ့ Striatum အတွက်အရှုံးနှင့်အမြတ်၏ differential Encoding အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,2မေလ 2007, 27 (18): 4826-4831
ventral နှင့် dorsal Basal Ganglia dopamine လှုပ်ရှားမှုကကမကထပြုခဲ့လူ့နာကျင်မှုစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံကိုအတွက်အပြောင်းအလဲတွေဟာ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 18 အောက်တိုဘာလ 2006, 26 (42): 10789-10795
အစောပိုင်းကလေးဘဝအပြုအမူတားစီးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် Striatal Functional ပြင်ဆင်ခြင်း အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 14 ဇွန်လ 2006, 26 (24): 6399-6405
ရောအမှား၏အာရုံကြောဆက်စပ် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 26 အောက်တိုဘာလ 2005, 25 (43): 9919-9931
အစောပိုင်း-အဆင့်ပြင်းထန်သောရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နှင့်အတူဆုလာဘ်, Motivation နှင့် Emotion စနစ်များ Associated Neurophysiology ၏ဂျာနယ်, 1 ဇူလိုင်လ 2005, 94 (1): 327-337
လုပ်သူများဟာမျောက် Caudate နျူကလိယနှင့် Putamen differential encoding အတွက် Active ကိုအာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏လှုံ့ဆျောမှုရလဒျညွှန်ကြား အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,7ဧပြီလ 2004, 24 (14): 3500-3510
လူ့ Striatum နှင့် Prefrontal Cortex အရာဝတ္ထုများတွင်အပြောင်းအလဲများနှင့်နည်းဥပဒေဆက်နွှယ်အတွက် differential တုံ့ပြန်ချက် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,4ဖေဖော်ဝါရီလ 2004, 24 (5): 1129-1135